Herinandron’ny fampahalalana ny moana marenina: fomba hafa hampitan-kafatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Septambra 2008 9:40 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, македонски, Português, Français, Español, 日本語, English
Moa fantatrao fa maro amin'ny moana izay mampita hevitra amin'ny alalan'ny fipeliky ny tanana, no mihevitra io fipeliky ny tanana io ho fiteniny voalohany ary ny teny voasoratra kosa ho fiteniny faharoa? Tsy nahalala aho manko fa soa ihany fa nahita ireo lahatsary ampolony nasehon'ny avy ao amin'ny fikambanan'ny moana manerantany, teo aho vao naheno ny momba io sy lohahevitra hafa tsy fantatro teo aloha. Hotontosaina mandritra ny herinandro farany amin'ny volana septambra ny herinandro iraisam-pirenena natokana ho an'ny moana marenina, ka mandritra izany fotoana izany no handefasako lahatsary mikasika ny moana marenina manerana ny tany, koa mino aho fa ainga tsara hahalalanao bebe kokoa momba io kilema iray io sy ny fiainan'ireo olona miaina anatin'io fahalemana io ireolahatsary manaraka ireo.(lahatsoaratra nadika jerena)
Avy amin'i Manos Cuenteras avy any Arizantina (mpiresaka amin'ny alalan'ny tanana)[es] ny lahatsary voalohany. Manararaotra ny Androm-pirenena ho an'ny moana marenina tany Arizantina ry zareo hilazany amin'ny mpamaky azy fa hivoaka tsy ho ela boky fitantarana amin'ny alalan'ny tanana sy amin'ny teny Esipaniolona ho an'ny ankizy. Ao amin'ny fanehoan-kevitra momba ny rakikira an-dahatsary Esipaniolona mampiseho ireo olona mandika ny boky be mpividy manerantany tahaka ny Andrin'ny tany (Pilliers de la Terre), Harry Potter, Rômeô sy Zolieta ary ny boky hafa ho amin'ny firesahan-tanana Esipaniolona, no hanazavan'ny mpampiasa ny YouTube ny fahasahiranan'ny moana marenina mamaky sorateny satria tsy mifandraika loatra amin'ny fiteniny andavanandro ny vakiany ao.
Tsy teny iraisam-pirenena moa ny tenin'ny tanana fa miankina amin'ny teny ambava ihany. Maro ny firenena samy manana ny fanaovany azy ary matetika no tena samihafa tanteraka tahaka ny an'ny Britanika sy ny any Etazonia na dia mitovy fiteny aza ireo firenena roa ireo. Azonao jerena eto ihany ny fampahafantarana bebe kokoa momba ny tenin'ny tanana, ary hotantarain'ny mpampiasa YouTube mergfkt amintsika ihany koa ny tantaran'ny resaka amin'ny alalan'ny tanana Amerikana sy ny fiaraha-monin'ny moana marenina amin'ny ankapobeny.